Pics2Mov Pro - Slideshow Maker ~ မိုးညိုသား
Pics2Mov Pro - Slideshow Maker
1:46 PM iOS app, iOS ဆိုင်ရာ No comments
Pics2Mov Pro - Slideshow ကို IOS User တို့အတွက်ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Pics2Mov Pro - Slideshow က မိမိ တို့ ၏ ဓာတ်ပုံတွေကို လှပသော ဘောင်လေးတွေ ဖြင့် အလှဆင်နိုင်သလို၊Photo Slideshow တွေကိုလည်း မိမိ စိတ်ကြိုက် Video files များဖန်တီး နိုင်ပါလိမ်မည်။Pics2Mov Pro - Slideshow ကို $ 2.99 ဖြင့်ရောင်းထားသော်လည်း အောက်ကလင့်တွင် Free ရယူပါ။
ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ..Facebook Page လေးကိုတော့ LIKE ပေးသွားပါဗျာ..လိုအပ်တာတွေကိုလည်း C-box မှာ မှာကြားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Download လုပ်နည်း။ ** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။
Credit To - KO MIN